တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း(၄၀) အထိ ရနေတဲ့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်က (၉)နှစ်သားလေး – Shwe Thuta
တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း(၄၀) အထိ ရနေတဲ့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်က (၉)နှစ်သားလေး
Shwe Thuta | December 22, 2020 | World News | No Comments
တက္က ဆက်ပြည် နယ်က အသက်(၉ )နှစ်သာရှိသေး တဲ့ YouTuber လေးတစ်ေ ယာက်ဟာ YouTube လောကမှာတော့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီလိုရပ်တ ည်မှုမျိုးကို အဆိုပါေ ကာင်လေးက (၃)နှစ်ဆက်တိုင် စံချိန်ထိမ်း ထားနိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး၊ အခုနှစ်မှာတော့ သူရဲ့ဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ သန်း(၄၀)အထိ ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ YouTuber လေးရဲ့အ မည်ကတော့ Ryan Kaji ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကလေးက စားစရာပစ္စည်းေ တွကို Review ပေးတာတွေ၊ ဂိမ်းတွေကို ရောင်းအားမြင့် တင်ပေးတာတွေ ပြုလုပ်ေ ပးရင်းနဲ့ YouTube လောကမှာ အအောင်ြ မင်ဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဝင်ငွေက လည်း ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Forbes မဂ္ဂဇင်းက နှစ်စဉ်ေ ရွးချယ်တဲ့ နယ်ပယ်ကဏ္ဍ အသီးသီးရဲ့ ဝင်ငွေအကောင်း ဆုံးစာရင်းမှာ Ryan ကိုတော့ တခြား YouTuber တွေ မယှဉ်နိုင်သေးပါဘူး။ Ryan ရဲ့ YouTube ချန်နယ် အမည်ကတော့ Ryan’s World ဖြစ်ပြီး၊ Sub ပြုလုပ် ထားသူမှာ (၁၂.၂)ဘီလီယံအထိ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ သူရဲ့နာမည်ကြီး ဗွီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့-
Huge Eggs Surprise Toys Challenge ကို ကြည့်ရှုသူ (၂)ဘီလီယံ အထိ ရှိခဲ့ပြီး၊ YouTube သမိုင်းတစ်ေ လျှာက်မှာတော့ လူကြည့်အများဆုံး ထိပ်တန်းဗွီဒီယို (၆၀)စာရင်းမှာ ပါဝင်ခွ င့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ YouTube ကနေ ဝင်တဲ့ဝင်ေ ငွအနက် အရုပ်ထုတ်ေ လးတွေဖောက်ပြီး၊ ဖြုတ်ခြင်းတပ်ခြင်း မှတ်ချက်များပြောခြင်းစတဲ့-
ဗွီဒီယိုလေးေ တွကြောင့် ဒေါ်လာ (၂၉.၅)သန်း အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရုပ်ကုမ ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ သူရဲ့ Review ကြောင့် Target, Amazon နဲ့ Walmart တို့ရဲ့ ပလက်ဖော င်းတွေ ကနေ ယခုနှစ်ေ ရာင်းချနိုင်စွမ်းဟာ ဒေါ်လာ သန်း(၂၀၀)အထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါတင်မ ကသေးဘဲ Ryan ဟာ Nickelodeon လို့ခေါ်တဲ့ကေ လးချန် နယ် တစ်ခုနဲ့လည်း-
စာချုပ်ချုပ် ဆို ထားပြီး Ryan’s Mystery Playdate အမည်ရ ဆီရီးစ်တွေ ထုတ် လွှင့်နေပါတယ်။ Ryan ဟာ YouTube ပလက်ဖောင်းက မဟုတ်တဲ့ အခြားဝင်ေ ငွတွေလည်း ရှိနေပြီး၊ ပညာရှင်အ ချို့ရဲ့တွက်ချ က်မှုအရ Ryan ရဲ့တစ်နှစ်ဝ င်ငွေဟာ ဒေါ်လာသန်း(၇၀)ဝန်းကျ င်လောက်ထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
Ref ; AsiaOne
တကၠ ဆက္ျပည္ နယ္က အသက္(၉ )ႏွစ္သာရွိေသး တဲ့ YouTuber ေလးတစ္ေ ယာက္ဟာ YouTube ေလာကမွာေတာ့ ဝင္ေငြအေကာင္းဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီလုိရပ္တ ည္မႈမ်ိဳးကို အဆုိပါေ ကာင္ေလးက (၃)ႏွစ္ဆက္တုိင္ စံခ်ိန္ထိမ္း ထားႏုိင္ခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး၊ အခုႏွစ္မွာေတာ့ သူရဲ႕ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ သန္း(၄၀)အထိ ရွိပါတယ္။
အဆုိပါ YouTuber ေလးရဲ႕အ မည္ကေတာ့ Ryan Kaji ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကေလးက စားစရာပစၥည္းေ တြကို Review ေပးတာေတြ၊ ဂိမ္းေတြကို ေရာင္းအားျမင့္ တင္ေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ေ ပးရင္းနဲ႔ YouTube ေလာကမွာ အေအာင္ျ မင္ဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ဝင္ေငြက လည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
Forbes မဂၢဇင္းက ႏွစ္စဥ္ေ ရြးခ်ယ္တဲ့ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးရဲ႕ ဝင္ေငြအေကာင္း ဆုံးစာရင္းမွာ Ryan ကုိေတာ့ တျခား YouTuber ေတြ မယွဥ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ Ryan ရဲ႕ YouTube ခ်န္နယ္ အမည္ကေတာ့ Ryan’s World ျဖစ္ၿပီး၊ Sub ျပဳလုပ္ ထားသူမွာ (၁၂.၂)ဘီလီယံအထိ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သူရဲ႕နာမည္ႀကီး ဗြီဒီယုိဖုိင္ျဖစ္တဲ့-
Huge Eggs Surprise Toys Challenge ကုိ ၾကည့္႐ႈသူ (၂)ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး၊ YouTube သမုိင္းတစ္ေ လွ်ာက္မွာေတာ့ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး ထိပ္တန္းဗြီဒီယုိ (၆၀)စာရင္းမွာ ပါဝင္ခြ င့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ YouTube ကေန ဝင္တဲ့ဝင္ေ ငြအနက္ အ႐ုပ္ထုတ္ေ လးေတြေဖာက္ၿပီး၊ ျဖဳတ္ျခင္းတပ္ျခင္း မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာျခင္းစတဲ့-
ဗြီဒီယုိေလးေ တြေၾကာင့္ ေဒၚလာ (၂၉.၅)သန္း အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အ႐ုပ္ကုမ ၸဏီေတြ အေနနဲ႔ သူရဲ႕ Review ေၾကာင့္ Target, Amazon နဲ႔ Walmart တုိ႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာ င္းေတြ ကေန ယခုႏွစ္ေ ရာင္းခ်ႏုိင္စြမ္းဟာ ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀)အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါတင္မ ကေသးဘဲ Ryan ဟာ Nickelodeon လုိ႔ေခၚတဲ့ကေ လးခ်န္ နယ္ တစ္ခုနဲ႔လည္း-
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိ ထားၿပီး Ryan’s Mystery Playdate အမည္ရ ဆီရီးစ္ေတြ ထုတ္ လႊင့္ေနပါတယ္။ Ryan ဟာ YouTube ပလက္ေဖာင္းက မဟုတ္တဲ့ အျခားဝင္ေ ငြေတြလည္း ရွိေနၿပီး၊ ပညာရွင္အ ခ်ိဳ႕ရဲ႕တြက္ခ် က္မႈအရ Ryan ရဲ႕တစ္ႏွစ္ဝ င္ေငြဟာ ေဒၚလာသန္း(၇၀)ဝန္းက် င္ေလာက္ထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။
ထီဆုကြီး ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် အလှူလာခံတဲ့သူတွေ ကျောင်းကိုအတင်းဝင်ရောက် လာတာကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေခဲ့ရတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်… (ရုပ်သံ)
ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက် တခုကြောင့် ၁၈ နှစ်ကြာ တွင်းတူးနေခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ်အဘိုးအို….
သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Supermarket ရဲ့ နံရံနဲ့ အအေးခန်းသေတ္တာကြားထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားကို 10 နှစ်ကြာမှတွေ့ရှိခဲ့
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……
နန်းအမရာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ….
ခက်ဝေမိုးရဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ် ဗီဒီယိုလေး…..
ခင်အင်ကြင်းကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…
Copyright © 2021 Shwe Thuta.